“Koobabka ugu fiicnaa nilosheyda waxaan kula guuleestay Real Madrid… James Rodríguez – Gool FM
(Bayern) 23 Luulyo 2018. Xidiga caalamiga ah ee reer Colombia ee Bayern Munich James Rodríguez ayaa dib u soo celiyay xiisaha uu u qabo inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Real Madrid inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
27 jirkan ayay wararku xaqiijinayaan inuu si aad ah u xiiseenayo dib ugu laabashada garoonka Santiago Bernabéu, gaar ahaan ka dib markii uu ka tagay tababaraha Faransiiska Zinedine Zidane.
Zinedine Zidane ayaan si buuxda fursad u siinin James Rodríguez inta uu ku sugnaa garoonka Santiago Bernabéu.
James Rodríguez ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu kaga hadlay sida uu wali u xasuusan yahay guulihiisa kooxda Real Madrid.
“Real Madrid waxa ay aheyd kooxdii goolasha ugu badan aan ku dhaliyay, 32 gool waxaan ku dhaliyay Porto, halka 36 gool aan ku dhaliyay kooxda Real Madrid”.
“Sidoo kale wax sahlan ma ahan, inaan ku sameeyay 42 kubad cawineed”.
“Shaki kuma jiro in Real Madrid ay tahay kooxda koobabka ugu badan aan kula guuleystay”.
“Ilaa iyo haatan waxaan ku suganahay Bayern Munich, xili ciyaareedka ugu horeeyay wuxuu ahaa mid cajiib ah ee aad u wanaagsan, waana ku faraxsanahay, waxaan dareensanahay in jamaahiirta iyo kooxda ay inbadan I jecelyihiin”.
Mbappe oo Messi iyo Ronaldo midkood ka saaray tartanka Ballon d'Or! (Wuxuu magacaabay 5-laacib oo isagu uu ku jiro)